Dowladda oo soo afjartay weraar qaatay 18 sacadood – Radio Daljir
Dowladda oo soo afjartay weraar qaatay 18 sacadood
Maarso 1, 2019 6:21 g 0
Ciidamada Ammaanka Soomaaliya ayaa ku dhowaad 18 saacadood ku qaadatay inay soo afjaraan weerar rag ka tirsan Al-Shabaab ku qaadeen dhismayaal ku yaala Wadada Maka Al-Mukarama oo isugu jiray Hotelo, goobo ganacsi iyo guri dad rayid degenaayeen.
Weerarkan oo ah kii ugu saacadaha dheeraa, marka dib loogu eego weerarada tooska ah ee Al-Shabaab sanadihii u dambeeyay ka fuliyeen Muqdisho, ayaa sababay khasaare fara badan oo dhimasho iyo dhaawac ah iyo burbur lixaad leh.
Ciidamada Booliska dowladda Soomaaliya ayaa xalay ilaa maanta duhurkii howlgalka ka qeyb qaadanayay, iyagoo la dagaalamayay dabley hubeysan oo gudaha u gashay dhismaha Shideeye oo isugu jira goobo ganacsi iyo deegaan.
Dhismaha Shideeye ayaa ku dhow Hotelka Maka Al-Mukamara, oo Al-Shabaab sheegtay in bartilmaameedka weerarka ahaa, hase ahaatee raggii hubeysnaa ay qaldameen oo ay galeen dhismahaas.
Dhismaha oo ahaa mid ciriiri ah, isla markaana aad adag ayaa la sheegay inay keentay in howlgalka dheeraado, lana soo afjari waayo, isla markaana dableydii hubeysneyd ay galeen meelo gabaad ah oo dhismaha ka mid ah
Howlgalkan ayaa maanta duhurkii waxaa ku soo biiray Ciidamada sida gaarka u tababaran ee loo yaqaano Gaashaan, kuwaasoo markii ay gudaha u galeen dhismaha adeegsaday bambaanooyin iyo hub culus, taasoo mar kale xaalada goobta ka dhigtay mid dagaal.
Abaarihii 4-tii galabnimo oo howlgalka sii socdo ayaa Ciidamada Gaashaan waxay miinooyin ku xireen dhismaha uu ku jiray mid ka mid ah raggii hubeysnaa, kaasoo rasaas ka soo ridayay goob uu ku dhuumaaleysanayay oo ay adkeyd in la galo.
Intaas kaddib ayaa Ciidamada waxay darbiga ku xireen miinooyin, iyagoo qarxiyay, waxaana sidaas ku burburay dhammaan dhismihii Shideeye oo dhulka la simay, inkastoo markiisa hore qeyb ahaan uu qaraxa ku burburay.
Howlgalo lagu baadigoobayo meydadka ku hoos jira dhismayaasha hoostiisa ayaa socda, waxaana la soo bixiyay meydka mid ka mid ah dableydii dhismaha ka dagaalamayay, iyadoo weli aanay wax war ah laamaha ammaanka ka soo saarin.
Qaraxyadii xalay ka dhacay Wadada Maka Al-Mukarama ayaa sababay burbur baaxad leh, khasaare dhimasho iyo dhaawac fara badan, iyadoo la qiyaasayo in dhimashadu ay ka badan tahay sodon, halka dhaawacu uu gaaray boqol ruux oo la dhigay Isbitaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Puntland oo ka hadlay Qaraxii xalay ka dhacay Muqdisho